बाइबलका अन्त-समयका चिन्हहरू देखा परेको छ: हामी कसरी प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्न सक्छौं? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
23 जुन 2021
By Anyuan, Philippines
दुई हजार वर्षअघि, प्रभुका अनुयायीहरूले उहाँलाई सोधे, “तपाईंको आगमन र संसारको अन्तको चिन्ह के हुनेछ?” (मत्ती २४:३)। प्रभु येशूले जवाफ दिनुभयो, “अनि तिमीहरूले लडाइँ र लडाइँका हल्लाहरू सुन्‍नेछौ: तिमीहरू व्याकुल नहोओ: किनकि यी सबै कुराहरू हुनैपर्छ, तर अन्त्य अझै आएको हुँदैन। किनकि जातिको विरूद्ध जाति र राज्यको विरूद्ध राज्य खडा हुनेछ: अनि विभिन्‍न ठाउँमा अनिकाल र महामारी अनि भुईँचालोहरू हुनेछन्। यी सबैचाहिँ दुःखका सुरूवात हुन्” (मत्ती २४:६-८)। आज, विश्‍वभरि प्रकोप बढी भन्दा बढी भइरहेको छ। भूकम्प, महामारी, अनिकाल, युद्ध र बाढी एक पछि अर्को हुन्छ। २०१९ को अन्त्यमा, चीनको वुहानमा एक नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइस देखा पर्‍यो। यसको प्रसारण दर डरलाग्दो छ; केही महिनाको अवधिमा देश भरि घटनाहरू देखा पर्‍यो। अहिलेसम्म, भाइरस संसारभर छिटो पनि फैलिएको छ। महामारीको पहिलो लहर अहिलेसम्म सकिएको छैन, र यसको दोस्रो लहर धेरै देशहरूमा शुरू भएको छ। अप्रिल २०२१ सम्म, भारत एकै दिनमा सङ्क्रमण ४००,००० भन्दा बढी पुष्टि भएका घटनाहरूसहित विश्‍वमा दोस्रो ठूलो सङ्क्रमण भएको देश बनेको छ र मृत्युको संख्या बढ्दो छ। यसको शीर्षमा, सेप्टेम्बर २०१९ र जनवरी २०२० बीच, अष्ट्रेलियामा वन्य आगोले ५,९०० भन्दा बढी भवनहरू ध्वस्त गर्यो र एक अरब भन्दा बढी जनावरहरूलाई मार्यो। त्यसपछि, शताब्दीमा एकपटक हुने मुसलधारे वर्षाले उही महादेशमा बाढी ल्यायो र झारको खरानी नदीमा फालियो, जसले गर्दा धेरै पानीको जीवहरू मरे। यसबाहेक, इन्डोनेसियामा बाढीको कारण दश हजारौं मानिसहरू घरबारविहीन भए। फिलिपिन्समा पनि ज्वालामुखीको विस्फोटन भएको थियो, अफ्रिकामा २५ वर्षमा सबैभन्दा खराब सलहको संक्रमण भएको छ, झिनजियांगमा ६.४ तीव्रताको भूकम्प भएको छ। … सूची जारी रहन्छ। प्रभुको आगमनसम्बन्धी बाइबलीय भविष्यवाणी पूरा भएको छ। प्रभु फर्कनुभएको छ भन्ने तर्कमा यो आधारित छ—त्यसोभए हामीले किन उहाँको आगमनलाई अझै स्वागत गरेका छौ त? यदि यो जारी रहन्छ भने के हामी महासंकष्टमा डुब्ने छैनौं? अनि प्रभुको आगमनलाई स्वागत गर्न हामीले के गर्नुपर्छ?
प्रभुको आगमनको बारेमा, यो धर्मशास्त्रमा कसरी अगमवाणी गरिएको छ?
प्रभुको आगमनको दोस्रो चिन्ह: आकाशीय विसंगतिहरूको प्रकटीकरण
प्रभुको पुनरागमनको स्वागत कसरी गर्ने
धेरै मानिसहरूले बाइबलका यी वचनहरू पढेका छन्: “हेर, उहाँ बादलहरूसहित आउनुहुन्छ” (प्रकाश १:७)। “अनि तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महान् महिमाका साथमा स्वर्गको बादलमा आइरहनुभएको देख्‍नेछन्” (मत्ती २४:३०)। तिनीहरू प्रभु बादलहरूका साथ आउनुहुनेछ भन्नेमा निश्चित छन्। यद्यपि, हामीले किन यस्तो दृश्य अझै देख्न सकेनौं? के यो एकमात्र माध्यम हो जसबाट प्रभु आउनुहुनेछ? हामीले वास्तवमा प्रभुको आगमनको बारेमा बेवास्ता गरेको एउटा मुख्य कुरा छ। धर्मशास्त्रमा परमेश्‍वर गोप्य रूपमा आउने बारेमा पनि भविष्यवाणीहरू छन्: “हेर, म चोरजस्तै आउँछु” (प्रकाश १६:१५)। “अनि मध्यरातमा आवाज आयो, हेर, दुलहा आइपुगे; उनलाई भेट्न जाओ” (मत्ती २५:६)। “यसकारण, तिमीहरू पनि तयार हौ: किनभने मानिसको पुत्र तिमीहरूले नसोचेको समयमा आउँछ” (मत्ती २४:४४)। “किनभने जसरी चट्याङ्गले आकाशमुनिको एउटा भागलाई उज्यालो बनाउँदा आकाशमुनिको अर्को भागलाई पनि चम्किलो बनाउँछ; मानिसको पुत्र पनि उनको दिनमा त्यस्तै हुनेछन्। तर सुरूमा उहाँले धेरै कुराहरूको कष्ट भोग्‍नुपर्छ, र यस पुस्ताद्वारा इन्कार गरिनुपर्छ” (लूका १७:२४-२५)।
“चोरजस्तै” र “मध्यरातमा आवाज आयो” भन्ने धर्मशास्त्रको सन्दर्भले संकेत गर्दछ कि जब प्रभु आखिरी दिनहरूमा फर्कनुहुन्छ, उहाँले चुपचाप गोप्य रूपमा त्यसो गर्नुहुनेछ। अनि “मानिसको पुत्र”ले केलाई जनाउँदछ? “मानिसको पुत्र” पक्कै पनि एक व्यक्तिबाट, एक आमा र बुबा, र मासु र रगतको साथ जन्मेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि प्रभु येशूलाई लिऊँ, उहाँ मानिस माझमा जिउनुहुने एक सामान्य व्यक्तिको स्वरूपमा देहधारी हुनुभयो। त्यसकारण हामी देख्न सक्छौं कि “मानिसको पुत्र”ले देहधारी परमेश्‍वरलाई जनाउँछ; आत्मालाई मानिसका पुत्र भन्न सकिदैन। यसका साथै, धर्मशास्त्रले यो पनि भन्छ, “तर सुरूमा उहाँले धेरै कुराहरूको कष्ट भोग्‍नुपर्छ, र यस पुस्ताद्वारा इन्कार गरिनुपर्छ।” पवित्र शास्त्रको यस खण्डमा प्रस्टै बताइन्छ कि जब प्रभु फर्कनुहुन्छ, तब उहाँले धेरै कष्ट सहनुहुनेछ र यस पुस्ताले उहाँलाई अस्वीकार गर्नेछ। हामी सबैलाई थाहा छ कि मानिसको पुत्रको रूपमा देहमा देहधारी हुँदा मात्र परमेश्‍वर अस्वीकृत हुन सक्नुहुनेछ, किनकि देहमा परमेश्‍वर पनि सामान्य हुन्छ र मानिसहरूले उहाँलाई चिन्दैनन्; तिनीहरूले उहाँलाई एक साधारण व्यक्तिको रूपमा व्यवहार गर्छन्, र परिणामस्वरूप उहाँले ठूलो कठिनाइ भोग्नु हुन्छ। यदि प्रभु मानिसमा आत्माको रूपमा देखा पर्नुभयो भने, त्यसोभए तिनीहरू असल होस् वा खराब, विश्‍वासीहरू होस् वा अविश्‍वासीहरू, वा परमेश्‍वरको विरोध गर्ने सबै जना परमेश्‍वरको सामु उपासनामा घोप्टो पर्नेछन्—किनकि यसरी परमेश्‍वरलाई कसले अस्वीकार गर्न सक्दछ र? अनि तब उहाँले कसरी कष्ट सहने थियो? यसले देखाउँदछ कि आखिरी दिनहरूका प्रभु मानवताकहाँ मानिसको पुत्रको रूपमा देखा पर्नुहुन्छ।
जब प्रभु फर्कनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुहुनेछ?
यस बिन्दुमा, केही दाजूभाइ र दिदीबहिनीहरू अलमल्लमा पर्न सक्छन्: यदि प्रभु आखिरी दिनहरूमा गोप्य रूपमा मानिसका बीचमा काम गर्न आउनुभयो भने, उहाँ बादलमा आउने भविष्यवाणी कसरी पूरा हुन्छ? परमेश्‍वरको कामको लागि चरणहरू र योजना छन्। परमेश्‍वर पहिले देह बन्नुहुन्छ र मानिसलाई बचाउने आफ्नो काम पूरा गर्न गोप्य रूपमा आउनुहुन्छ, र त्यसपछि बादलमा खुल्लमखुल्ला मानिसकहाँ देखा पर्नुहुन्छ। यस प्रश्नलाई बुझ्नको लागि, हामीले आखिरी दिनहरूमा उहाँ फर्कनुहुँदा प्रभुले के काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले अझ बढी जान्नु आवश्यक छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, “मैले तिमीहरूलाई भन्‍नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्‍दैनौ। तैपनि, जब उहाँ, अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाइ गर्नुहुनेछ: किनभने उहाँ आफ्‍नो तर्फबाट बोल्‍नुहुनेछैन; तर उहाँले जे सुन्‍नुहुन्‍छ उहाँले त्यही बोल्‍नुहुनेछ: र उहाँले तिमीहरूले आउनेवाला कुराहरू देखाउनुहुनेछ” (यूहन्‍ना १६:१२-१३)। “मलाई इन्कार गर्ने र मेरा वचनहरू ग्रहण नगर्नेलाई न्याय गर्ने एक जना हुनुहुन्छ: मैले बोलेको त्यो वचनले अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ” (यूहन्ना १२:४८)। “किनभने पिताले कुनै मानिसको न्याय गर्नुहुन्न, तर पुत्रलाई नै सबै न्याय सुम्पनुभएको छ” (यूहन्ना ५:२२)। बाइबलले यो पनि भन्दछ, “किनभने परमेश्‍वरको घरानाबाट न्याय सुरू हुने समय आएको छ” (१ पत्रुस ४:१७)। पवित्र शास्त्रका यी खण्डहरूले हामीलाई बताउँछन् कि आखिरी दिनहरूका परमेश्‍वर मुख्य रूपमा परमेश्‍वरको घरबाट शुरू गर्दै न्यायको काम पूरा गर्न, वचन बोल्नलाई आउनुहुन्छ। परिणामस्वरूप, जसले परमेश्‍वरको न्यायको काम स्वीकार गर्दछन् उनीहरू प्रभुको आगमनलाई स्वागत गर्दैछन्, र परमेश्‍वरसामु खडा हुन्छन्! आज, देहधारी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरले लाखौं वचनहरू बोल्नुभएको छ, जसमध्ये प्रायजसो वचन वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ भन्ने पुस्तकमा रेकर्ड गरिएको छ। यस पुस्तकमा, सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका वचनहरूले हाम्रो लागि अघि नै अतुलनीय रहेका धेरै रहस्यहरू प्रकट गर्दछ, जस्तै मानवजातिको विकासको इतिहास, शैतानले कसरी मानिसजातिलाई भ्रष्ट पार्छ, परमेश्‍वरले कसरी मानिसलाई बचाउनुहुन्छ, कस्ता किसिमका व्यक्तिहरू परमेश्‍वरका प्रिय हुन्, कस्ता मानिसहरूलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूको परिणाम र गन्तव्यहरू, र यस्तै अरू पनि। यति मात्र होइन, तर परमेश्‍वरले हाम्रो भ्रष्ट स्वभावलाई उजागर गर्दै, न्याय र सजायका वचनहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। सबै मानिसहरू जो न्याय र दण्डको वचनहरू स्वीकार गर्छन् तिनीहरूका भ्रष्ट स्वभावहरू सफा र रूपान्तरण हुनेछन्; तिनीहरू महासङ्कष्टको अघि विजयी हुनेछन्, र अन्तमा अनन्त परमानन्दको आनन्द लिनका लागि परमेश्‍वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। तिनीहरू जो परमेश्‍वर देहमा हुनुहुने र गुप्तमा काम गर्नुहुने अवधिमा परमेश्‍वरको आवाज सुन्न कोसिस गर्दैनन्, जसले आखिरी दिनहरूको परमेश्‍वरको न्यायको कामलाई स्वीकार्दैनन्, जसले आफ्नो धारणा र कल्पनाहरूअनुसार देहधारी परमेश्‍वरको दोषारोपण र ईश्‍वर-निन्दा गर्छन्, तिनीहरूलाई परमेश्‍वरद्वारा पर्दाफास गरिनेछ र हटाइनेछ। अनि यसैले, गहुँ र सामा, भेडा र बाख्रा, बुद्धिमति कन्या र मूर्ख कन्या, असल नोकर र खराब नोकर, सत्यलाई प्रेम गर्नेहरू र सत्यलाई घृणा गर्नेहरू—हरेकलाई पर्दाफास गरिनेछ र त्यसअनुसार वर्गीकरण गरिनेछ। त्यसपछि, परमेश्‍वर बादलहरूका साथ आउनुहुनेछ, पृथ्वीका सबै जातिहरू र मानिसहरूकहाँ खुल्लमखुल्ला प्रकट हुनुहुनेछ, र राम्रोलाई प्रतिफल दिन र खराबलाई सजाय दिन शुरू गर्नुहुनेछ, यसरी बाइबलीय भविष्यवाणीहरू पूरा गर्नुहुन्छ: “हेर, उहाँ बादलहरूसहित आउनुहुन्छ; अनि हरेक आँखाले उहाँलाई देख्‍नेछन्, र तिनीहरूले पनि जुनले उहाँलाई घोचे: अनि उहाँको कारण पृथ्वीका सबै जातिले विलाप गर्नेछन्” (प्रकाश १:७)। “अनि त्यसपछि स्वर्गमा मानिसको पुत्रको चिन्‍ह देखा पर्नेछ: अनि पृथ्वीका सबै कुलले शोक गर्नेछन्, अनि तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महान् महिमाका साथमा स्वर्गको बादलमा आइरहनुभएको देख्‍नेछन्” (मत्ती २४:३०)। त्यतिबेला, जसले परमेश्‍वरको विरोध, अस्वीकार गर्दछन् र दोषी ठहराउँदछन् उनीहरूले छाती पिट्नेछन र उनीहरूका दुष्कर्मका कारण पश्चातापले भरिनेछन्। परमेश्‍वरको कामबाट हामी देख्छौं कि परमेश्‍वर कति धर्मी, सर्वशक्तिमान् र ज्ञानी हुनुहुन्छ!
आज, देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्‍वरले पहिले नै मानिसहरूको एउटा समूहलाई बचाइसक्नु भएको छ। त्यसैले, विजेताहरू पनि बनाइएका छन्। गोप्य रूपमा हुने परमेश्‍वरको काम चाँडै अन्त हुनेछ, जसपछि सबै प्रकारको महासंकष्ट तुरून्त पृथ्वीमा आइपर्नेछ। हाम्रो अगाडि एउटा जरूरी काम छ: हामी प्रभु येशूको पुनरागमनलाई कसरी स्वागत गर्ने र आखिरी दिनहरूको परमेश्‍वरको कामलाई कसरी अँगाल्ने? प्रभु येशूले भन्नुभयो, “मेरो भेडाले मेरो सोर सुन्छ, र म तिनीहरूलाई चिन्छु र तिनीहरूले मलाई पछ्याउँछन्” (यूहन्‍ना १०:२७)। यी भविष्यवाणीहरू पनि बाइबलमा देखा पर्दछन्: “आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्‍नुहुन्छ सो, कान हुनेले सुनोस्” (प्रकाश २:७)। “हेर, म ढोकामा खडा हुन्छु र ढक्‍ढकाउँछु: यदि कसैले मेरो स्वर सुन्‍छ र ढोका खोल्‍छ भने, म उसकहाँ भित्र आउनेछु र म उसँग खानपान गर्नेछु र उसले मसँग खानपान गर्नेछ” (प्रकाश ३:२०)। र सर्वशक्तिमान परमेश्‍वर भन्नुहुन्छ: “परमेश्‍वरको काम शक्तिशाली छालजस्तै माथितिर बढ्छ। कसैले पनि उहाँलाई थुन्‍न सक्दैन, र उहाँको दौडलाई कसैले पनि रोक्‍न सक्दैन। उहाँका वचनहरूलाई ध्यानसँग सुन्‍नेहरू, र उहाँलाई खोज्ने र तिर्खाउनेहरूले मात्र उहाँका पाइलाहरू पछ्याउँछन् र उहाँको प्रतिज्ञा प्राप्‍त गर्छन्। जसले गर्दैनन् तिनीहरूले ठूलो विपत्ति भोग्‍नेछन् र तिनीहरूले पाउन लायकको दण्ड पाउनेछन्” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरले सबै मानवजातिको भविष्यमाथि नेतृत्व गर्नुहुन्छ”)। के तपाईं थुमाको पाइला पछ्याउन चाहनुहुन्छ? के तपाईं प्रभुलाई स्वागत गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईं महासङ्कष्टको अघि उठाइ लगिन चाहनुहुन्छ? परमेश्‍वरका वचनहरूले हामीलाई भन्दछन् कि यदि हामी प्रभुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं भने, सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरद्वारा व्यक्त गरिएका वचनहरू सत्य हुन् कि होइनन्, ती मण्डलीका निम्ति पवित्र आत्माका वचनहरू हुन् कि होइनन् भनेर हेरेर हामी कसरी परमेश्‍वरको आवाज सुन्न सिक्दछौं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। मलाई विश्‍वास छ कि यदि हामीसँग सत्यको खोजी गर्ने र तिर्सना गर्ने नम्र हृदय हुन्छ भने, परमेश्‍वरले हामीलाई चाँडै नै प्रभुको स्वागत गर्न डोर्याउनुहुनेछ!
अघिल्लो: संसार विपत्तिले घेरिएको छ: महासङ्कष्टअघि हामी कसरी उठाई लगिनेछौं?
अर्को: परमेश्‍वरप्रतिको विश्‍वास कसरी निर्माण गर्ने